News – Dainiksamchar
November 23, 2020 admin 221
November 23, 2020 admin 132
November 22, 2020 admin 4415
November 22, 2020 admin 2372
November 21, 2020 admin 6024
November 20, 2020 admin 3977
November 19, 2020 admin 7204
November 13, 2020 admin 18736
जमाना यति छिटो परिवर्तन भयो कि मान्छे हरुले जे पनि अनलाइनमै काम गर्न लागे ! अनलाइन बाट श्रीमती पाउँछन, अनलाइन बाटै नोकरी पाउछन भने पढाइ पनि अनलाइन मै हुन् थालेको धेरै भएको छैन ! इन्टरनेटको
November 13, 2020 admin 11624
मंसिर १ भाइटीका लगाउन अशुभ रहेको भन्ने ठूलो हल्ला फैलिएपछि पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति बोलेको छ । समितिले मंसिर १ भाइटीका लगाउन विभिन्न कारणले अशुभ रहेको भन्ने हल्ला गलत रहेको बताएको छ । शुक्रबार समितिका सचिव
November 12, 2020 admin 12100
आफ्ना बाबुलाई बाबा बाई भन्दै घरबाट निस्किएकी बालिकाको मामल नपुग्दै ज्या’न गएको छ। मामल अगाडिको गेटमा द’र्दनाक दु’र्घटनाबाट बालिकाको ज्या’न गएको हो। महिलाले आफ्नी छोरीलाई स्कुटीमा राखेर मामल आएकी थिइन्। तर मामल नपुग्दै उनको स्कुटी
LEX 18 agenda conversation: Job club (117454)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (109455)
Hello world! (109017)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (107898)
पुरानो नोट बेचौ लखपति बनौं ! यी पुरानो नोटको मुल्य अहिले १० लाख भन्दा पनि बढी छ ! सेयर गरौँ भएकाले eBay मा बेचौं ! (18736)